Fahagagana GNU / Linux: misy respin vaovao! Manao valiny sa Distros? | Avy amin'ny Linux
Linux Post Install | | Fitsinjarana, About us
Amin'ity lahatsoratra voalohany amin'ny Mey ity dia hiresaka momba izany isika «GNU / Linux Miracles », un Mamerina (sary mivantana sy azo apetraka ary azo ampiharina) miorina amin'ny GNU / Linux Distro antso «MX Linux », izay noforonina ho an'ny tanjona na tanjona samihafa.
Ary manararaotra ny famoahana tamin'ny fomba ofisialy omaly, a kinova vaovao 2.3 (3DE4) ambanin'ny anarana kaody Ultimate, mety ny mijery sy maneho hevitra kely kokoa momba ilay voalaza Mamerina.
1 Inona no atao hoe Respin?
2 Momba ny MX Linux
3 Miracles GNU / Linux: famerenana manokana (tsy ofisialy) momba ny MX Linux
3.1 Inona ny MilagrOS?
3.2 Inona no vaovao ao amin'ny kinova farany an'ny MilagrOS GNU / Linux?
3.2.1 Fomba sy tanjona mahazatra
3.2.2 Inona ny vaovao
3.3 Fampidinana, fametrahana, fampiasana ary pikantsary
3.3.1 A.- Tontolo iainana XFCE Desktop
3.3.2 B.- tontolo iainana Desktop Plasma
3.3.3 C.- Tontolo iainana Desktop LXQT
4 Manao valiny sa Distros?
Inona no atao hoe Respin?
Alohan'ny hidirany tanteraka hiresaka momba azy Mamerina «Miracles GNU / Linux», zava-dehibe ny hanazavana indray fa a Mamerina. Ho an'ity dia nanoro hevitra an'ity publication teo aloha ity izahay:
"Fantaro ny Respin, sary ISO azo entina (velona) ary azo apetraka izay azo ampiasaina ho teboka famerenana, fampitaovana fitahirizana ary / na fizarana GNU / Linux Distribution, ankoatry ny fampiasana hafa. Ary izany dia natsangana tamin'ny ISO na fametrahana GNU / Linux Distro efa misy. Amin'ny tranga MX Linux, misy ny MX Snapshot, izay fitaovana mety tsara hanatanterahana izany, ary izay maoderina sy mahomby soloina fitaovana taloha hafa, toy ny «Remastersys y Systemback», saingy izany dia miasa amin'ny MX Linux ihany." MX Snapshot: Ahoana ny fomba hamoronana MX Linux Respin manokana?
Momba ny MX Linux
Ary ho an'ireo tsy mahalala na tsy mampiasa «MX Linux » Manoro hevitra izahay ny hijery ireo lahatsoratra navoakanay teo aloha Fitsinjarana GNU / Linux, mba hahafantaran'izy ireo azy sy hahitan'izy ireo ny mety ho fahombiazany, izay tsy ferana fotsiny famoronana ny valiny:
"MX Linux no anaona Distro GNU / Linux dia nanao fiaraha-miasa teo amin'ny vondrom-piarahamonina antiX sy MX Linux. Ary izy dia ao anatin'ny fianakavian'ny Operating Systems izay natao hanambatra solosaina kanto sy mahomby miaraka amin'ny fahamarinan-toerana avo sy fampisehoana matanjaka. Ireo fitaovana misy sary dia manome fomba mora hanatanterahana asa maro samihafa, raha Live USB sy lova-tsary lova avy amin'ny antiX kosa dia manampy portability mahatalanjona sy fahaizana remastering tena tsara. Ho fanampin'izany, manana fanohanana marobe azo alaina amin'ny alàlan'ny horonan-tsary, antontan-taratasy ary forum iray tena sariaka izy.".
Miracles GNU / Linux: famerenana manokana (tsy ofisialy) momba ny MX Linux
Inona ny MilagrOS?
El Mamerina «Miracles GNU / Linux» toa ny voalazany ihany tranokala ofisialy antsoina hoe "Tetikasa Tic Tac" no manaraka:
Inona no vaovao ao amin'ny kinova farany an'ny MilagrOS GNU / Linux?
Fomba sy tanjona mahazatra
Amin'ny ankapobeny, hoy i Respin dia manana ireto toetra sy tanjona iraisana ireto, ho an'ireo kinova rehetra:
Kitapo isan-karazany (firmware, trano famakiam-boky sy rindranasa) tanjona kendrena, sy tanjona manokana, toy ny, mpamily fitaovana (tambajotra LAN sy WiFi, Printer sy Multifunctional) ary fampiharana ho an'ny fampiasana birao sy teknika, multimedia sy gamer ary fitrandrahana nomerika.
Fikirana tsara sy fanatsarana, noho ny fanjifana CPU sy RAM azy ambany eo am-panombohana, ary koa ho an'ny fandehanana haingana sy ny eny ivelany.
Fanaingoana manintona amin'ireo sehatr'asa samihafa momba ny Desktop (DE) sy Window Managers (WMs) anao, izay efa tafiditra ao, napetraka ary voalamina.
Fandraisana an-tanana, araka ny tsiron'ny mpampiasa sy ny zavatra takian'ny solosaina ampiasaina, amin'ny alàlan'ny sehatr'asa samihafa ao amin'ny Desktop (DEs) sy Window Managers (WMs).
Mitsitsia fotoana amin'ny dingana mahazatra, toy ny: fametrahana lava, fikirakirana ary fanaingoana ny Rafitra miasa, ary koa ny fotoana sarobidy amin'ny fametrahana sy ny fizotry ny fikirakirana ny fampiharana.
Sorohy ny fampiasana Internet voalohany ilaina, hananana GNU / Linux Distro feno sy miasa.
Manamora ny fitoviana amin'ny fampiasana Linux, izany hoe afaka manana GNU / Linux Distro mitovy amina fikirakira mitovy amin'ny solosaina samihafa, ary koa afaka mitondra azy hatraiza hatraiza ao anaty USB Drive, sady Distro no ampiasaina isan'andro ary koa mpamonjy sy Fanamboarana Distro.
Ny farany kinova 2.3 (3DE4) Ultimate, navoaka tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny 01 / 05 / 2021, ary manana ny vaovao manaraka momba ny teo aloha kinova 2.2 (3DE3) Omega:
Kely ny fonosana tafiditra ao, toa ny: adobe-flashplugin, anydesk, atmel-firmware, blender, caliber, clamav, codeblocks, discord, exodus, flatpak (ny fampiharana anao sy ny singa apetraka ihany fa tsy ny app), boaty gnome, librecad, lxc, krita, kdenlive, papirus- sary-kisary, lohahevitra, kotrokorana, uuid-dev ary uuid-runtime, mpitantana, divay, ankoatry ny rindranasa sy tranomboky maro hafa.
Misy fonosana vaovao, toy ny: atomicwallet, byobu, dvdstyler, dvdisaster, gamemode, google-chrome, gpodder, intel-gpu-fitaovana, libcurl4-openssl-dev, libgl1-mesa-glx, libqt5websockets5, linux-firmware, multidoge, python-newt, python-setuptools , pywall, efijery, simplescreenrecorder, smart-notifier, hazo, karazany, xorg-server-source, zenmap.
Tafiditra ao ny Window Manager vaovao: Ahitana IceWM ankehitriny, miampy FluxBox, OpenBox ary I3WM. Ary ny an'ny tontolo Desktop: XFCE, Plasma ary LXQT.
Fanovana tokana amin'ny ISO kely kokoa: Version 2.3 (3DE4) Ultimate dia tonga amin'ny 3.2 GB ISO tokana (+/- 3.4 GB net), tsy toy ny taloha 2.2 (3DE3) izay tonga tamin'ny fanontana 2, ISO Full antso +/- 4.4 GB Omega ary ISO Lite antso +/- 2.2 GB Alfa.
Araka ny tranonkala ofisialy efa voalaza, ny rohy fampidinana azy dia toy izao:
Sintomy ny MilagrOS 2.3 sy 2.2 -> GDrive - Mega
Sintomy ny MilagrOS 2.0 sy 2.1 -> Mega
Azonao atao koa ny manandrana «MilagrOS GNU / Linux» ao amin'ny tranokala DistroTest amin'ny fipihana ity rohy manaraka ity: Andramo ny MilagrOS GNU / Linux 2.X amin'ny Internet ao amin'ny DistroTest.
Ny fametrahana sy ny fampiasana ankapobeny dia mitovy amin'ny an'ny rehetra «MX Linux », noho izany dia ho ampy ny mahita boky torolàlana na fametrahana ary mampiasa horonantsary voalaza GNU / Linux Distro. Ny tena maha samy hafa azy dia «MX Linux » tsy miaraka afa-tsy amin'ny XFCE, na Plasma na FluxBox, raha ao "Fahagagana GNU / Linux" azonao atao ny mampiasa ny karazany avy DE sy WMs.
Noho izany, apetraka indray mandeha, "Fahagagana GNU / Linux" azo atomboka amin'ny iray amin'ireo karazany DE sy WMs, araka ny aseho etsy ambany:
A.- Tontolo iainana XFCE Desktop
B.- tontolo iainana Desktop Plasma
C.- Tontolo iainana Desktop LXQT
Manao valiny sa Distros?
Araka ny hitanao, a Mamerina vita amin'ny MX Linux na Antix Mety ho a safidy tsara indrindra ho an'ireo izay manomboka amin'ny tontolon'ny Linux na manana kely fifehezana ny fametrahana, fametrahana ary ny fanatsarana ny fizotrany a GNU / Linux Distro, toy ny, MX Linux na Antix distro madio na hafa toa GNU / Linux Debian, satria, na dia tena tsara aza izy ireo, matetika dia mitaky ny Internet hanao fametrahana feno mahafa-po miaraka amin'ny fotoana fametrahana lava, fikirakirana, fanatsarana ary fanaingoana.
Un Mamerina manana tombony azo amoronana at mila mpampiasa, vondrona fiaraha-monina na fikambanana, mampihena ny fampiasana ny internet ho an'ny fametrahana am-pahombiazana amin'ny karazana solosaina iray na maromaro, ary hampihena ny fandaniana amin'ny ora / asa ary mankasitraka ny fitoviana amin'ny fametrahana rehetra.
Mandritra, a GNU / Linux Distro madio toy ny Debian, Ubuntu, Mint ary ny hafa mazàna tonga lafatra na mety ho an'ny mpampiasa antonony na mandroso eo amin'ny tontolon'ny Linux, satria, izay kely indrindra ilaina amin'ny ISO kely fotsiny no entin'izy ireo ka ny mpampiasa dia manangana avy amin'ny fototra mafy sy amin'ny Internet izay ilaina rehetra, na ho an'ny solosaina izany na ho an'ny mpizara, raha ilaina izany.
Ary toy ny "Fahagagana GNU / Linux" namboarina ho an'ny fitaovana maoderina 64 Bit afaka mampiasa Respin miaraka amin'ny loharano vitsivitsy na vitsivitsy MX Linux na Antix for solosaina 32-bit taloha amin'ny loharano vitsy na mihena, toy ny Mamaly antsoina hoe «Loc-OS» y Cereus.
Ary farany, raha tianao ireo antony rehetra ireo, manasa anao izahay hijery ity famoahana hafa teo aloha ity:
Manantena izahay fa izany "lahatsoratra kely ilaina" amin'ny «MilagrOS» GNU / Linux, Respin mahaliana sy maoderina (sary mivantana sy azo apetraka ary fanao mahazatra) miorina amin'ny «MX Linux », izay miaraka amin'ny a fanaingoana be indrindra sy fanatsarana, izay mahatonga azy io ho mety Solosaina "64 Bit" amin'ny fanahafana; dia mahaliana sy mahasoa indrindra, ho an'ny rehetra «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» ary fandraisana anjara lehibe amin'ny fanaparitahana ny tontolo iainana mahatalanjona sy goavambe ary mitombo «GNU/Linux».
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fitsinjarana » Fahagagana GNU / Linux: misy respin vaovao! Manao valiny sa Distros?
Antidistro dia hoy izy:
Ny filazana fa mety ho tsara kokoa noho ny debian izany, izany dia tokony ho fanatika ary tsy dia mahalala firy momba ny Linux. Mxlinux dia distro izay tsy ratsy, efa nametaka azy nandritra ny volana vitsivitsy aho ary farany nanala azy, satria distro io izay mbola betsaka tokony hosorana, misy tsy fahombiazana mitohy izay mikasika ny baolinao ohatra. ny usb ary indray alina tsy nahita azy ireo ary zavatra maro izay nandeha tsara foana ary raha tsy nanao na inona na inona ianao dia tsy nahomby tampoka ilay distro. Amin'ny pc iray hafa dia niaraka tamin'ny fanandramana debian nandritra ny 3 taona aho ary tao anatin'ny 3 taona dia mbola tsy tonga ny andro raha tsy nanana olana na dia iray aza aho ary izany dia ny fitsapana debian, izay heverina fa fanandramana ary tsy mitombina ny bua ary toy izany, tsy misy Avy amin'ny zava-misy, tsy fahalalana marina, manana olana bebe kokoa amin'ny debian marin-toerana aho fa tsy amin'ny fitsapana debian ary fantatro ny olona nandany 20 taona nandritra ny fitsapana ny debian fa tsy olana iray akory, debian dia debian be dia be. Amin'izao fotoana izao ny xubuntu dia tsara kokoa noho ny mxlinux sy ny mint Linux, mxlinux nosoloiko xubuntu izy ary io no zavatra tsara indrindra nataoko ary ity atolotray anao eto ity dia tsy inona fa ny baomba iray be loatra amin'ny zavatra an'arivony tapitrisa, ary ny mxlinux dia laninao ny fiainanao manala be dia be ny zavatra tsy misy ilana azy, satria raha apetakao amin'ny tavy bebe kokoa dia vonoy dia andao handeha, tsy misy dikany, ity no anti distro.
Valiny any Antidistro
Miarahaba anao, Antidistro. Misaotra tamin'ny hevitrao. Ho valin'izay nolazainao dia nasiako fanitsiana kely ity fehezanteny ity, satria azo antoka fa ny Respin dia mety ho safidy tsara indrindra ho an'ireo izay manomboka amin'ny tontolon'ny Linux na tsy manana baiko kely momba ny fizotrany, ny fikirakirana ary ny fizotran'ny fanatsarana ny GNU Distro / Linux , toy ny manam-pahaizana na mpampiasa tsy Windows, raha toa kosa ny GNU / Linux Distro madio toa an'i Debian, Ubuntu, Mint ary ny hafa dia matetika no tonga lafatra na mety amin'ny mpampiasa antonony na mandroso ao amin'ny Linux World, satria izay kely indrindra ilaina fotsiny no entin'izy ireo ao ISO kely iray hahafahan'ny mpampiasa manangana avy amin'ny fototra mafy sy amin'ny Internet izay ilaina rehetra, na ho an'ny solosaina na ho an'ny mpizara, raha ilaina izany.
Raha miasa amin'ny distro manokana toy izany fotsiny izy dia misy respin kely.
Miarahaba, Diego. Misaotra tamin'ny hevitrao. Ary azo antoka, antenaina fa ny fitaovana MX Snapshot dia lasa manerantany ho an'ny Distros GNU / Linux hafa. Na izany aza, misy fomba (fitaovana) maromaro misy na dia tsy dia mahomby na mora ampiasaina aza, toy ny Linux Respin (https://linuxrespin.org/) ary RemasterSys. Ity farany, nampiasako azy io taloha, tao amin'ny Ubuntu 18.04 ary nanao respin azo nametrahana tena tsara. Ary mazava ho azy, ho an'ireo mandroso kokoa hatrany, ny fampiharana ny LFS (Linux From Scratch) ka hatramin'ny rangotra, manaova Distro ho anao araka izay tianao. Antenaina fa, raha tsy misy izany, ny GNU / Linux Distro tsirairay dia hamoaka ny fitaovany manokana hanaovana Respines.
Hummm, hifikitra amin'ny Linux Mint 20 aho izay tena mety tokoa, mazava ho azy raha ho an'ireo izay manomboka amin'ny Linux tsara, misy distro hafa izay ho an'ireo izay manomboka amin'ny Linux dia ho tia azy satria mandeha tsara ary miaraka ny zavatra efa napetraka mialoha dia Zorin. jerena
Miarahaba anao, Octavio. Misaotra tamin'ny hevitrao. Mazava ho azy fa ny fampiasana respin vita avy amin'ny GNU / Linux Distro rehetra, izay atokana ho an'ny olona, ​​vondrona, fiaraha-monina na fikambanana dia manana tombony betsaka, indrindra ho an'ireo izay vaovao amin'ity tontolon'ny Free Software, Open Source ary GNU / Linux ity. Ary momba an'i Zorin, heveriko fa distro mahafinaritra sy mahafinaritra izy io, indrindra ho an'ireo vao manomboka sy vao manomboka.
Tiako ny Milagros GNU / Linux, saingy manana olana toy ny motherboard MX-LINUX, ny Flatpak. Raha manandrana mametraka fonosana amin'ny alàlan'ny Flatpak ianao, ny iray dia maharitra mandrakizay sy roa, dia mamaky tampoka ny PC nefa tsy afaka manokatra an'i Thunar mandritra ny fotoana fohy.
Miarahaba anao, Aranqoti. Misaotra tamin'ny hevitrao. Tsy mbola nanandrana flatpak tany amin'ny Distros hafa aho, satria efa 3 taona no nampiasa MX Linux sy MilagrOS. Saingy, tsy fantatro hoe mandra-pahoviana ny fametrahana ny fonosana flatpak amin'ny antsalany, tsapako fa amin'ny MX Linux / MilagrOS izay mitaky fotoana maharitra.
Manidina izy ireo, tsy fantatro tsara hoe aiza ny olana, fa efa hitako tamin'ny forum fa zavatra mitovy amin'izany no mitranga amin'ny MX-LINUX sy MilagrOS, ary tsy nahita vahaolana aho ary mahamenatra izany, satria ny FLATPAK dia miely bebe kokoa isan'andro ary mamela hametraka kinova farany amin'ny rindranasa marobe
Azo antoka. Ary eny, mampanantena zavatra be i Flatpak raha oharina amin'ny Snap. Ary i AppImage dia miady amin'ny fametrahana ny tenany.
Kirulo dia hoy izy:
Izaho dia manana an'ity Respin ity napetraka ao amin'ny solosaina finday AMD E1-2500 izay manana fitaovana 4GB ram. Ny marina dia mandeha tsara izy, mailaka ny ekipa. Ao amin'ity solosaina ity dia nametraka ny Mx-Linux teo aloha tamin'ny KDE aho (mampiasa ilay birao mitovy amin'ny MilagrOS aho) ary kivy be ny hafainganan'ny solosaina.
Rehefa mandeha ny fotoana, ny tanjoko dia ny hametraka an'i Debian miaraka amin'ny KDE ao amin'io solosaina io, saingy tsy haiko raha hahatratra an'io fahaizany io ankehitriny miaraka amin'i MilagrOS aho. Tsy haiko raha afaka mamorona torolàlana kely na fampianarana momba ireo «Fifanarahana sy fanatsarana tsara ianao, noho ny fihenan'ny CPU sy RAM azy eo am-panombohana, ary koa ny haingana sy ny famonoana» izay nataonao tamin'ity Respin ity, satria tena tsikaritra izy ireo na farafaharatsiny ao amin'ny solosainako dia tsikaritra izy ireo.
Misaotra betsaka amin'ny asanao 🙂
Valiny amin'i Kirulo
Miarahaba anao, Kirulo! Misaotra tamin'ny hevitrao. Anisan'ireo fanatsarana maro natao tao MilagrOS ampiasainay Preload sy Prelink, ho fanampin'ny Deborphan sy Localepurge. Saingy, fampiharana, tranomboky ary add-on marobe no apetraka, ary azo antoka fa izay ilaina ihany no entina ao anaty fitadidiana rehefa manomboka, izany hoe, manala serivisy. Mba hanaovana izany, dia esorinay izay tsy ilaina amin'ny fanombohana amin'ny alàlan'ny safidy "Session and Start" an'ny XFCE sy ny app Stacer. Ary koa, i MilagrOS dia mampiasa ny kinova AHS an'ny MX Linux, saingy miaraka amin'ny kernel taloha mba hifanaraka bebe kokoa amin'ny solosaina loharano ambany. Manoro hevitra anao aho hijery ity lahatsoratra teo aloha ity hahitanao ny fanatsarana: https://blog.desdelinux.net/como-optimizar-gnu-linux/
Ny antsipiriany momba ny patch natolotry ny University of Minnesota dia nambara